Ani gaaffiin qaba: Selective hate speech law in Ethiopia? What about these fake Journalists? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAni gaaffiin qaba: Selective hate speech law in Ethiopia? What about these fake Journalists?
Ani gaaffiin qaba:
Waldaan Abbootii seeraa Oromoo akka jiru dhageenya. Garuu, biyya alaattis ta’e biyya keessatti namoonni dhuunfaa; miidiyaaleen, waldaaleen adda addaa ifatti gadi ba’anii Oromoo arrabsaa oolu. Sabni guddaan akka Oromoo kashalabboota miidiyaa irratti ba’aniin wayita arrabsamu dhaga’uun nama dhukkuba. Inni mirga Bilisummaa Oromoo kabachiisuuf lubbuu tokkitti kennee baddaa fi gammoojjii keessa jooree qabsootti jiru hojii isaatti jira. Jaarmiyaan siyaasaa kaanis akkasuma. Garuu Oromoon ogummaa qabuun mirga saba isaaf yoo hin dhaabbanne barachuun qofti gatii maalii qaba?
Warra Oromoo arrabsaa oolan kana warri ogummaa seeraa qaban maaliif himata itti bananii seeratti dhiyeessuu dadhaban? Yoo humna dhaban Oromoo gargaarsa gaafachuu danda’u.
Kana gochuun akkamiin isaan rakkise?
አብይ አህመድና ኤርሚያስ ለገሰ የOPDO አባላት ነበሩ:: ሁለቱም ለኦሮሞ ያላቸው ጥላቻ ተመሳሳይ ነው:: ቢቻላቸው ኦሮሞ የሚባል ብሔር ከምድረ-ገፅ ቢጠፋ ምኞታቸው ነው:: ይህንን እውነታ ኤርሚያስ ለገሠ በተደጋጋሚ ገልፇል:: በኦሮሞ ድርጅት ስም ጠ/ሚንስተር የመሆን እድል ያገኘው አብይ አህመድ ሌላኛው ኤርሚያስ ለገሠ ነው::
Siyaasaan Bilxiginnaa akka dukkanaan baatirii ibsaa deemaa dhokachuuti.
Naannoo Tigraayitti hokkorri akka ka’u feeti. Suuraa kijibaa fi kan biraas hokkorri ka’e jedhanii maxxansaa jiru. ETV irrattis Hokkarri naannoo Tigraayitti jabaate jedhan. Dhuma irratti mootummaan Federaalaa akka jidduu seenu jiraattotni gaafatan jedhan. Adeemsa isaanii kanaan maaltu itti aana? Deemanii Tigraay rukutuu mitii? Kana Tilmaamuuf siyaasaa beekuu hin barbaachisu.
Garuu deemanii rukutuuf humna qabuu jarri Bilxiginnaa kan jedhutu gaafii guddaadha. Mee inuma ilaalla silaa baatirii isaan ibsan argaa jirraa.
Erga KITAABA abiy birri I miliyeena 3.6 biroon barnoota oromiyaa bitee,